Fitsitsiana ny hazo : Maro ny tetikasa ho an’ny angovo fahandro | NewsMada
Fitsitsiana ny hazo : Maro ny tetikasa ho an’ny angovo fahandro
Iaraha-mahalala ny olana ateraky ny fandaniana hazo hatao kitay na saribao fahandro. Maro ny fikambanana na fandaharanasa manao tetikasa manokana mikasika azy. Anisan’izany ny Fikambanana hampandrosoana ny angovo herinaratra, ny tetikasa Eco-GIZ, ny ONG Tandavanala, ny fikambanana LLD Planète urgence, ny Cirad, sns.
Manofana ny Malagasy amin’ny fanamboarana fatana nohatsaraina izy ireny, miampy fampiofanana amin’ny fitantanana sy ny fikarohana lalambarotra na koa fikarohana fitaovana na kojakoja ilaina amin’ny famokarana. Anisan’ny naseho teto an-dRenivohitra ny sasany tamin’izy ireo, tamin’ity volana novambra ity. Amin’ny fampiasana fatana nohatsaraina, mihena 30-60% ny fandaniana kitay ary mihena 15-45% ny saribao.
Vina nofaritana ao anatin’ny Politika vaovao ho an’ny angovo ny hampiasan’ny 70%-n’ny tokantrano malagasy ny fatana nohatsaraina raha toa ka ny 4% ihany izany ny taona 2015.
Tsikaritra aloha, fa vitsy ny tokantrano vonona hampiasa ny fatana nohatsaraina satria mbola tsy takatry maro an’isa ny vidin’ny fatana nohatsaraina. Nambaran’ny tompon’andraikitry ny ONG Etc Terra, Maud Ferrer, fa “vahaolana ny hampidinana ny vidin’ny fatana nohatsaraina, hamafisina ny fanentanana amin’ny fampahalalana ny tombontsoa azo aminy”.
Mampihena ny tahan’ny karbona miparitaka eny amin’ny tontolo sy ny habakabaka koa ny fanamboarana saribao manaraka ny fenitra teknika sy nohatsaraina. Tanjona ny hidinan’izany taha izany ho 20-30% amin’ny taona 2030 raha 10% ankehitriny.